नेपाली सिनेमा किन हेर्ने?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
असार १, २०७५ नवीन रायमाझी
काठमाडौँ — मेरा परिचितहरु मध्ये करिब ७५ प्रतिशतले नेपाली सिनेमा नहेर्ने बताउँछन्, उनीहरु हेर्दै हेर्दैनन् कि हेरेर पनि झुट बोल्छन् । त्यो उनीहरुलाई नै थाहा होला । तर म धेरै पछिसम्म पनि नेपाली सिनेमाको नियमित दर्शक थिएँ, पछि विभिन्न कारणले नेपाली सिनेमा हेर्न छोडें ।
आफुलाई अंग्रेजी सिनेमाको दर्शक बताउँदा गर्व गर्ने मान्छेहरु पनि भेटेको छु । तर म अंग्रेजी सिनेमा हेर्दिन, पहिलो त म अंग्रेजी बुझ्दिन र दोश्रो त्यस्ता सिनेमाको कथामा रहेको परिवेशसँग म तारतम्य राख्न सक्दिन ।
कुनैबेला मलाई ब्रुस लि र ज्याकी चाङ्गको सिनेमा हेर्न निकै रमाइलो लाग्थ्यो, त्यो पनि कथा बुझेर भन्दा पनि त्यस्ता सिनेमामा देखाइने स्टन्टको कारण, त्यसै गरेर अपवादको रुपमा अंग्रेजी सिनेमा पनि हेरियो, त्यो भने सिनेमा भित्र हुने नायक र नायिकाको चुम्बन र अन्तरंग दृश हेर्नको लागि । कोहि कोहि आफुलाई सभ्य र आधुनिक भन्न रुचाउनेहरुले कोरियन र इरानी सिनेमा हेर्ने बताउँछन्, अब त्यस्ता सिनेमाहरु कस्ता हुन्छन् त्यो मलाई थाहा छैन, पारखीले बुझाइ दिए अनुग्रहित हुने थिएँ । आजकल मैले नियमित हेर्ने भनेको हिन्दी सिनेमा हो र मलाई हास्य "जनरा" को सिनेमा हेर्न मन लाग्छ ।
म सिनेमाको ज्ञाता होइन र सिनेमा निर्माण गर्न के कस्ता बाधा तथा अबरोध छिचोल्नु पर्छ त्यसको पनि ज्ञान छैन । मेरो बिचारमा एउटा सामान्य दर्शकलाई सिनेमा निर्माण गर्न कति मेहनत पर्छ वा कुन क्यामराले खिच्यो भन्ने जस्ता नितान्त प्राबिधिक बिषयहरुसँग त्यति मतलब होला जस्तो पनि लाग्दैन । यसको साथै सिनेमा निर्माण गर्नु अत्यन्तै कठिन काम हो भनेर नथाक्नेहरुको अगाडी एउटा नौ वर्षको बालकले सिनेमा निर्देशन गरिदिन्छ र त्यो सिनेमा यति स्तरीय बन्छ कि कुरै नगरौं । यो पनि मैले आजसम्म बुझ्न सकेको छैन ।
सिनेमा निर्माण भनेको बिशुद्ध ब्यापार हो र सबैले नाफा कमाउनको लागि गर्ने भएको कारणले मन नपरी नपरी पनि नेपाली सिनेमालाई माया गर्नको लागि मात्र सिनेमा हेर्नु पर्ने बाध्यता कसैलाई छैन । भारतीय समाजसँग सामाजिक अबस्था र भाषा धेरै हदसम्म मिल्ने हुनले सिनेमाको कथामा पनि केहि समानता आउनु स्वभाविक हो । तर हरेक फ्रेम हुबहु नक्कल भएका नेपाली सिनेमा हेर्नु भन्दा हिन्दी सिनेमा नै किन नहेर्ने ? यसमा नेपाली सिनेमासँग सम्बन्धित ब्यक्तिहरुको के विचार होला? बजारमा दशौं किसिमका चाउचाउ छन् भने नमिठो लागेर पनि नेपालमै बनेको चाउचाउ खानु पर्ने बाध्यता जसरी उपभोक्तालाई छैन । त्यसरी नै नेपाली सिनेमा नै हेर्नु पर्ने बाध्यता दर्शकलाई छैन र हुनु पनि हुँदैन ।
केहि यस्ता प्रसंग छन्, जुन प्रसंगहरु हिन्दी सिनेमामा नै पचासौं पटक दोहरिइसकेका छन् भने त्यस्तै बासी प्रसंग फेरी नेपाली सिनेमामा हेर्दा एउटा दर्शकको आँखा कति बिझाउला । त्यो सम्बन्धित ब्यक्तिहरुले महशुस गर्नुपर्ने हो । यस्तै केहि पटक पटक हरेक सिनेमामा दोहरिइरहने प्रसंग यँहा उल्लेख छ :
प्रसंग १ : सिनेमाको नायिका कुनै पार्कमा खुशी भएर गीत गाएर नाच्दै छिन् । उनले नाच्दानाच्दै उस्तै लुगा लगाएका एक हुल ठिटीहरु आएर नायिकालाई काउकुती लगाउँछन् र जान्छन् । त्यस्तै उनीहरुले गीतको बीचबिचमा तीन चार पटक काउकुति लगाउँछन् र बेपता हुन्छन्, मानौ त्यो समुह नायिकालाई काउकुती लगाउनको लागि मात्र नियुक्त गरिएको हो ।
प्रसंग २ : नायक र नायिका आफ्नो प्रेममा परेको अबरोध सहन नसकेर घरबाट भाग्छन्, बीच बाटोमा पराल भएको एउटा ट्रक आउँछ, त्यसैमा चढेर लडिबुढी खेल्दै र गीत गाउँदै कता पुग्छन् । त्यो सायद निर्देशकलाई पनि थाहा हुँदैन होला भने दर्शकले कसरी थाहा पाउने?
प्रसंग ३ : कलेजको पुस्तकालयमा किताब छान्दै जाँदा नायक नायिका को भेट हुने र एउटा मात्र पुस्तक पाइने र त्यो दुबैलाई चाहिने वा कुनै पसलमा बचेको एउटा मात्र सामान दुबैलाई चाहिने । अब यो प्रसंगमा कुनै सिनेमामा झगडा गर्ने र कुनैमा मेलमिलाप मै छुट्टिने हुन्छ, तर जे भए पनि कालान्तरमा प्रेम बस्ने निश्चित छ ।
प्रसंग ४ : नायिकाले बनमा घाँस काट्न जानु र नायक सहरबाट घर आउने एउटै समय मिल्नु । नायिकाले गाईबस्तु धपाउँदै गीत गाउँदै जाँदा गीत सकिने बेलामा नायक नायिका आमने सामने हुनु ।
प्रसंग ५ : खोला किनारमा नायिका अर्ध नंग्न अबस्थामा नुहाई रहेको हुनु र त्यो दृश नायक वा खलनायकले देख्नु । यदी नायकले देख्यो भने प्रेम गाँसिने र खलनायकले देख्यो भने बलात्कार हुने निश्चित छ, तर बलात्कार भएको अबस्थामा पनि पछि नायक कताबाट झुल्किन्छ त्यो दर्शकले बुझ्न सक्दैनन् ।
यस्ता अरुपनि अनेकौं प्रसंगहरु छन्, जसमा अब यस्तो हुँदैछ भनेर पहिले नै दर्शकले थाहा पाउँछन्, मेरो बिचारमा पहिले नै दर्शकले यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर अनुमान लगाउनु एउटा निर्देशकको असफलता हो ।
त्यस्तै, हिन्दी सिनेमाबाट ठ्याक्कै अनुबाद गरेर राखिएको सम्वाद, एउटा भाषाबाट अर्को भाषामा अनुबाद गर्दैमा त्यो समाजको परिबेशसँग नमिल्ने पनि हुन्छ । जस्तै, यो क्षेत्र तथा काम मेरो लागि होइन भनेर भन्न अँग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, "दिस इज नट माइ कप अफ टी", अब यसैलाई नेपालीमा अनुबाद गरेर "यो मेरो चियाको कप होइन" भनेर भन्यो भने कति हाँसो लाग्दो होला । यसको लागि नेपाली भाषामा भन्ने अरु नै भनाइहरु छन् ।
यस्तै गरेर हुबहु अनुबाद गरेर राखिएका केहि सम्बादमा, जो आफै खराब छ उसले अरुलाई खराब भन्नु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा भनिएको एउटा सम्बाद, "चिनोय सेठ जिसके अपने घर शिशेका हो ओ दुसरों पर पत्थर फेंका नही करते" (हिन्दी), "हर्के साहु ऐनाको घरमा बसेर अरुलाई ढुङ्गा हान्नु हुँदैन" (नेपाली) । त्यस्तै उर्दु भाषामा कसैले बिना मतलब झर्को लगाउने प्रश्नहरु सोधेर हैरान गरिरहेको छ भने, "अरे मेरे बाप मुझे बक्स करो" अर्थात् मलाई यो कुरा नसोध्नु भनिन्छ, अब यस्तै प्रसंगमा एउटा सिनेमामा "ए मेरो बाउ अब तिमि जाउ" भनिएको छ, जो हस्यास्पद छ ।
अर्को कुरा नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा एक प्रतिशत काम र ९९ प्रतिशत कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ । पत्रपत्रिकामा आएको समाचार अनुसार रिलिज पुर्व सबै सिनेमा यस्तो भब्य निर्माण भएका हुन्छ कि कुरा गरेर साध्य छैन । तर जब सिनेमा रिलिज हुन्छ त्यो सिनेमा आकाशबाट जमिनमा पुग्छ । दर्शकको लागि निर्माण गरेको सिनेमालाई दर्शकले नै अस्वीकार गरेपछि बढ्ता कुरा गर्नुको कुनै फाइदा होला जस्तो लाग्दैन । त्यस्तै एक करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको सिनेमाले एक हप्ता मै तीन करोडको ब्यापार गरेको प्रचार गरिन्छ । अब यो अनुपातमा मुनाफा कमाउने सायदै अर्को ब्यापार होला, मैले नबुझेको यदी यस्तो मुनाफा हुने हो भने निर्माताहरु किन दोहोरिंदैनन् ?
हालै एक सिनेमा निर्माता नक्कली नोट प्रकरणमा पक्राउ परेका छन् । प्रहरीमा बयान दिने क्रममा उनले आफुले सिनेमाको सुटिङ्गमा प्रयोग गर्न त्यो नोट छापेको बयान दिएका छन् । आज संसारमा प्रविधिले यत्रो फड्को मारेको छ कि चार जना मान्छेको भिडलाई खिचेर लाखौंको भिड देखाउन सकिन्छ भने पैसा चाहिएमा पैसा नै छाप्नेकुरा सजिलै पचाउन सकिंदैन । यदी कुनै सिनेमामा युद्धको छायांकन गर्नु पर्यो भने के त्यस स्थानमा मान्छे मार्ने नै हो?
यस्तै माथि उल्लेखित कुराहरु जस्तै म मनोरन्जन लिन नसकेर मैले नेपाली सिनेमा नियमित हेर्न छोडेको करिब दश बर्ष भयो । यसबीच दुई तीन वटा सिनेमा हेरेको थिएँ र ति सिनेमाहरुले मन छोएको थियो, तर त्यो सिनेमा बनाउने निर्देशकले पनि पुन सिनेमा निर्माण गरेको सुन्न पाएको छैन । नेपाली सिनेमाले हिन्दी सिनेमासँग प्रतिस्पर्धा कुनै हालतमा गर्न सक्ने होइन, यसैले सानो भए पनि नेपाली सिनेमाको आफ्नै बजार बनाउने हो । यदी यस्तो गर्न नसक्ने हो भने सिनेमा निर्माण गरेर तँ नायक र म निर्देशक हुँ भन्ने बाहेक अर्को कुनै उपलब्धि हुँदैन र सिनेमा निर्माण आत्मरतिमा गएर टुङ्गिन्छ ।
प्रकाशित : असार १, २०७५ १७:३१